အိမ်အသစ်ကြီးက အရမ်းကိုကြီးကျယ် ခမ်းနားလှပပြီး ဖက်ရှင်ဆိုင်ကြီး တစ်ဆိုင်လို့တောင် အထင်မှားလောက်တဲ့ အိမ်ကြီးကို ထုတ်ပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ‘လမင်းကဗျာ’.. – Shwe Naung
အိမ်အသစ်ကြီးက အရမ်းကိုကြီးကျယ် ခမ်းနားလှပပြီး ဖက်ရှင်ဆိုင်ကြီး တစ်ဆိုင်လို့တောင် အထင်မှားလောက်တဲ့ အိမ်ကြီးကို ထုတ်ပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ‘လမင်းကဗျာ’..
N N | January 3, 2021 | Celebrity | No Comments
ပရိသတ်ကြီး ရေ သရုပ်ဆောင် ‘လမင်းကဗျာ’ကတော့ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားတွေနဲ့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးတွေ တော်တော် များများမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင် ခဲ့သူဖြစ်လို့ ချစ် ပရိသတ်တွေကြားမှာ မသိသူ မရှိလောက်အောင် နာမည်ရနေပြီးသား ဖြစ်ပါတယ် ။
‘လမင်းကဗျာ’က ကျရာ ဇာတ်ရုပ်မရွေး ပီပီပြင်ပြင်နဲ့ သဘာဝကျကျ ဖန်တီးနိုင်တာ ကြောင့်လည်း ချစ် ပရိသတ်တွေက သူမကိုချစ်ခင်အားပေးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
‘လမင်းကဗျာ’က တော့ အနုပညာ အလုပ်တွေအပြင် ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးကိုလည်း ကြိုးစားပမ်းစား လုပ်ကိုင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ချစ်ဖို့အရမ်း ကောင်းတဲ့ မျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ လမင်းကဗျာက ကိုယ်လုံးကိုယ် ပေါက်လှပပြီး အချိုးအစား ပြေပြစ်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ‘လမင်းကဗျာ’က ဖက်ရှင်ကျကျ ဝတ်စား ဆင်ယင်တတ်ပြီး အမြဲတမ်း မိမိုက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
မကြာသေးခင်ကဘဲ ‘လမင်း ‘လေး တစ်ယောက် သူမ နေထိုင်မယ့် အိမ် အသစ်လေးကို စိတ်တိုင်းကျ ပြင်ဆင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုဆိုရင် ‘လမင်းကဗျာ’ရဲ့အိမ်အသစ် လေးက လုံးဝပြီးစီးသွားပြီ ဖြစ်တာကြောင့် အိမ်အသစ် တက်ပွဲကိုပါ ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
အခုမှာလည်း လမင်းကဗျာက အိမ်အသစ်လေးမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေထိုင်ရင်းနဲ့ ဓာတ်ပုံလေး တွေရိုက်ပြီး အမှတ်တရ တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
သူမ က “အိပ်မက်တွေအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီ ”Home Sweet Home” ဆိုပြီး သူမရဲ့ အသစ်စက်စက် အိမ်လေးကို ပြသလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
‘လမင်းကဗျာရဲ့’ အိမ်လေးမှာတော့ အိပ်ခန်းကအစ အရမ်းကို ခမ်းနားလှပပြီး ဖက်ရှင်ဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင် လို့တောင် အထင်မှားရလောက်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။သရုပ်ဆောင် ‘လမင်းကဗျာ’ကိုယ်တိုင် စိတ်တိုင်းကျ ဖန်တီးထားတဲ့ အိမ်အသစ် လေးရဲ့ပုံရိပ်တွေကို ချစ် ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ်နော် ။
ပရိသတ္ႀကီး ေရ သ႐ုပ္ေဆာင္ ‘လမင္းကဗ်ာ’ကေတာ့ ဗီဒီယို ဇာတ္ကားေတြနဲ႔ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားႀကီးေတြ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ခဲ့သူျဖစ္လို႔ ခ်စ္ ပရိသတ္ေတြၾကားမွာ မသိသူ မရွိေလာက္ေအာင္ နာမည္ရေနၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္ ။
‘လမင္းကဗ်ာ’က က်ရာ ဇာတ္႐ုပ္မေ႐ြး ပီပီျပင္ျပင္နဲ႔ သဘာဝက်က် ဖန္တီးႏိုင္တာ ေၾကာင့္လည္း ခ်စ္ ပရိသတ္ေတြက သူမကိုခ်စ္ခင္အားေပးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။
‘လမင္းကဗ်ာ’က ေတာ့ အႏုပညာ အလုပ္ေတြအျပင္ ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရးကိုလည္း ႀကိဳးစားပမ္းစား လုပ္ကိုင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။
ခ်စ္ဖို႔အရမ္း ေကာင္းတဲ့ မ်က္ႏွာေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ လမင္းကဗ်ာက ကိုယ္လုံးကိုယ္ ေပါက္လွပၿပီး အခ်ိဳးအစား ေျပျပစ္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါ့အျပင္ ‘လမင္းကဗ်ာ’က ဖက္ရွင္က်က် ဝတ္စား ဆင္ယင္တတ္ၿပီး အၿမဲတမ္း မိမိုက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။
မၾကာေသးခင္ကဘဲ ‘လမင္း ‘ေလး တစ္ေယာက္ သူမ ေနထိုင္မယ့္ အိမ္ အသစ္ေလးကို စိတ္တိုင္းက် ျပင္ဆင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အခုဆိုရင္ ‘လမင္းကဗ်ာ’ရဲ႕အိမ္အသစ္ ေလးက လုံးဝၿပီးစီးသြားၿပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အိမ္အသစ္ တက္ပြဲကိုပါ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္ ။
အခုမွာလည္း လမင္းကဗ်ာက အိမ္အသစ္ေလးမွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ ေနထိုင္ရင္းနဲ႔ ဓာတ္ပုံေလး ေတြ႐ိုက္ၿပီး အမွတ္တရ တင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။
သူမ က “အိပ္မက္ေတြအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ”Home Sweet Home” ဆိုၿပီး သူမရဲ႕ အသစ္စက္စက္ အိမ္ေလးကို ျပသလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။
‘လမင္းကဗ်ာရဲ႕’ အိမ္ေလးမွာေတာ့ အိပ္ခန္းကအစ အရမ္းကို ခမ္းနားလွပၿပီး ဖက္ရွင္ဆိုင္ႀကီးတစ္ဆိုင္ လို႔ေတာင္ အထင္မွားရေလာက္တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။သ႐ုပ္ေဆာင္ ‘လမင္းကဗ်ာ’ကိုယ္တိုင္ စိတ္တိုင္းက် ဖန္တီးထားတဲ့ အိမ္အသစ္ ေလးရဲ႕ပုံရိပ္ေတြကို ခ်စ္ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ ပါတယ္ေနာ္ ။
မတ်မတ်အေးသောင်းရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး…..
သားလေးနဲ့ခွဲခွာ ရနေပေမယ့်လည်း သားလေးရဲ့ videoလေး ကိုကြည့်ပြီး အလွမ်းသယ် နေတဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုး……..
ဆက်ဆီကျကျ ကိုယ်လုံးလေးကို အထာကျကျ လှုပ်ခါ ကပြထားတဲ့ သဇင်ဦးရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး…….
ဆက်ဆီကျနေတဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်လေးကို အထာကျကျ လှုပ်ခါ ကပြထားတဲ့ ခေးကြီးလုရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး……..
လုံးတင်းနေတဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်နဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေတဲ့ အိချောပိုရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ…………..
ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း လှပနေတဲ့ နန်းမွေစံရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ……….
ဖြူဖွေးနေတဲ့ အတွင်းသား အလှများကို ပရိသတ်တွေ မြင်အောင် လှစ်ဟပြနေတဲ့ နွယ်ဒါလီထွန်းရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ……..
ညို့အားပြင်းတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှု အပြည့်ရှိနေတဲ့ မေဘရဏီစံရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ……….
လုံးတင်းနေတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ အထာကျကျ ပိုစ့်တွေ ပေးနေတဲ့ ဆုရတီလင်းရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ…………..
တင်းရင်း ပြည့်နေတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ အထာကျကျ ပိုစ့်လှလှလေးတွေ ပေးနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် ဖြူသိင်္ဂကျော်ရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ………..